अन्तिम समयमा एसईई स्थगित : सरकारको अव्यावहारिक र अपरिपक्क निर्णय | जनदिशा
अन्तिम समयमा एसईई स्थगित : सरकारको अव्यावहारिक र अपरिपक्क निर्णय
Sahas March 19, 2020	No Comments
सरकारले बुधबार साँझ अकस्मात माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । बिहीबारदेखि तय गरिएको एसईई परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्ने सरकारको उक्त निर्णयको अहिले सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ ।
सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको अवस्थामा अनिश्चितकालका लागि परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको यो निर्णयलाई धेरैले अपरिपक्क र अव्यावहारिक निर्णयको संज्ञासमेत दिएका छन् । सरकारको यस्तो अपरिपक्क निर्णयले कोशौं टाढादेखि हिँडेर परीक्षा केन्द्रसम्म पुगेका लाखौं विद्यार्थीहरु ठूलो मारमा परेका छन् । सरकारको यो निर्णय व्यावहारिक हिसावले पुष्टि हुन् नसक्ने भन्दै अधिकांशले दुई दिन पहिला यस्तो निर्णय लिन केले रोकेको थियो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
प्रवेश-पत्र लिसकेको अवस्थामा परीक्षा स्थगित गरिँदा आफूहरु चर्को मारमा परेको विद्यार्थी र अभिभावकहरुको गुनासो छ । सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय लिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् । विद्यार्थीहरु परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्थामा परीक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक असरप्रति सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले निर्णय अपरिपक्क, अव्यवहारिक र असुहाउँदो भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
यस वर्षको एसइई परीक्षामा कूल चार लाख ८२ हजार ७०७ विद्यार्थी सहभागी हुँदै थिए । परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।
सरकारको यस निर्णयले सबैभन्दा बढी दुर्गम क्षेत्रका गरिव तथा विपन्न विद्यार्थीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । दिनभर हिँडेर परीक्षा केन्द्रमा पुगेका र होटलमा कोठा भाडामा लिएर बसेका विद्यार्थीहरु सरकारको निर्णयले अन्यायमा परेका हुन् ।
सरकारले भने विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अकस्मात निर्णय लिनु परेको बताएको छ । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर, अघिल्लो दिन मात्र नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको दावी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षा स्थगित नहुने बताएका थिए । मन्त्री पोखरेलले पर्याप्त सावधानी अपनाएर परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने भन्दै त्रासरहित वातावरणमा परिक्षामा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेका थिए ।
परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय बाहिरिए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पोखरेलको तिब्र आलोचना भैरहेको छ । अघिल्लो दिन परीक्षामा सहभागी हुन् औपचारिक आग्रह गर्ने तर भोलिपल्टै अनिश्चितकालका लागि परीक्षा स्थगितको निर्णय सुनाउने मन्त्री पोखरेलमाथि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
परीक्षाका सम्बन्धमा २४ घन्टाको अवधिमा फरक-फरक निर्णय आउनु तथा परीक्षा स्थगित गरिएको निर्णयसमेत नेकपाको सचिवालय बैठकले सार्वजनिक गर्नुले थप संसय थपेको छ । परीक्षा स्थगित भएको निर्णय सरकारका प्रवक्ताबाट औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुनु पूर्व नै नेकपाका प्रवक्ताबाट बाहिरिएको थियो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण एकाएक देखिएको होइन । डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट फैलिएको यो भाइरसको संक्रमण हाल विश्वका १७५ देशमा पुगिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ) ले महामारी घोषणा गरेको यो भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिएर सतर्कता अपनाउनु जायज मानिएपनि विद्यार्थीहरु परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्थामा परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त मान्न सकिंदैन ।
कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमप्रति सतर्कता अपनाउनै पर्छ । तर, लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसंग जोडिएको परीक्षा स्थगित गर्ने जस्तो संवेदनशील निर्णय किन हचुवाका भरमा लिइयो ? निर्णयका लागि अन्तिम अवस्थासम्म कुर्नुपर्ने कारण के पर्यो ? आमरुपमा उठिरहेको यस प्रश्नको सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।
Previous Previous post: स्थगित भयो एसईई
Next Next post: कोरोना सन्त्रास : २४ घन्टामा झण्डै एक हजारको मृत्यु, इटाली र अमेरिकाको अवस्था भयावह (पछिल्लो अपडेट)